MyOpenAds – Online advertising network in Yangon, Myanmar
Number of ad impressions we show per year
တစ်နှစ်အတွင်း ပြသထားတဲ့ ကြော်ငြာ အကြိမ်အရေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်
If you areabusiness or individual who are looking to expend your business and marketing activities online, please call us today to find out what you can achieve with advertising with us. Currently more than 250 millions ads are delivered each month.
အင်တနက်မှ စီးပွားရေးချဲ့ထွင်ချင်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် အင်တာနက်မှ ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် မည်သို့ အထောက်အပံဖြစ်စေနိုင်သည်ကို သိရှိနိုင်ရန် ကျွန်တော်တို့ကို အခုဘဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ လက်ရှိတွင် ကျွန်တော်တို့မှ ကြော်ငြာပုံပေါင်း သန်း ၂၅၀ ကျော်ကို website များတွင် ပြသပေးလျှက်ရှိသည်။
» ကြော်ငြာဖို့ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးလိုလျှင်
We work closely with top local publishers to achieve maximum revenue from their premium content.
ပြည်တွင်းရှိနာမည်ကြီး website များနှင့် အတူယှဉ်တွဲလုပ်ကိုင်ပြီး ကြော်ငြာဝင်ငွေ အများဆုံး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် ပေးနေပါတယ်။ ကြော်ငြာထည့်သွင်းလိုသည့် website ပိုင်ရှင်များ အတွက် ကြော်ငြာထည့်သွင်းပေးနေတာကြောင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါ
» အသေးစိတ် ပြောဆိုဆွေးနွေးချင်ပါက
Mingalar Bar! We are biggest online advertising network in Myanmar
မင်္ဂလာပါ! ကျွန်တော်တို့က အင်တာနက်ကြော်ငြာဝန်ဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်